Momba ny andiany vokatra:
1. Tsy tava na misy bodofotsy misy tariby
Ho an'ny insulation mafana sy acoustic amin'ny fampiharana, toy ny fantsona na fitaovana hafa ampiasaina amin'ny fanafanana, dia tsy misy vahaolana tsara kokoa noho ny bodofotsy vatolampy. Izy io koa dia tonga lafatra ho an'ny fampidiran-drivotra sy ny fampidinana rivotra. Ny bodofotsy volon'ondry vatolampy dia mikarakara tsara ny orinasa mitady insulation mafana ho an'ny sambo lehibe, valves, flange, milina kely, boiler ary zavamaniry mitovy amin'izany miasa amin'ny hafanana avo. Ampiasaina matetika izy io mba hamehezana ny faritra avo miolikolika ary azo tapahina mihitsy mba hifanaraka amin'ny endrika tsy ara-dalàna.
Ny takelaka Rock Wool dia natao ho an'ny insulation mafana sy acoustic amin'ny faritra fisaka na somary miolakolaka miasa amin'ny hafanana ambony sy ambany. Ireo solaitra ireo dia novokarina avy amin'ny fibre mifatotra amin'ny resin'ny lava sy tsy mirehitra. Mora ny manapaka sy mifanentana ary mitantana azy ireo. Izy ireo dia mety tsara amin'ny fanakanana ny faritra rehetra amin'ny trano efa misy sy vaovao ao anatin'izany ny birao, ny trano, ny varotra, ny fitsaboana, ny fampianarana ary ny toeram-pivarotana.
Sodina volon'ondry rock
Namboarina ho an'ny sodina insulation mafana sy acoustic mafy, ny fitambaran'ny hakitroky, tanjaka ary conductivity mafana tsara amin'ny mari-pana miasa avo dia manome insulation mahomby. Tena azo ampiharina amin'ny etona indostrialy sy ny fantsona fanodinana amin'ny refinery solika, orinasa simika ary toby famokarana herinaratra. Izy io koa dia manana ny versatility ampiasaina amin'ny fanafanana sy ny ventilation na hafa tsy indostria fampiharana.
Haavo anatiny: 22-820mm